Fomba fanamboarana vata fampangatsiahana tsy misy herinaratra - Ikkaro
firosoana >> Cómo hacer >> Fomba fanamboarana vata fampangatsiahana tsy misy herinaratra
Fomba fanamboarana vata fampangatsiahana tsy misy herinaratra
Amin'ny lahateny TED manaraka dia asehon'izy ireo anay ny fomba fanamboarana vata fampangatsiahana na vata fampangatsiahana miasa tsy misy herinaratra, izay toy ny tetikasa hafa dia tena mahaliana ho an'ny faritra misy olana na mitoka-monina eo amin'ny tontolon'ny indostrialy.
Avy amin'ity lahateny ity dia nanadihady kely momba an'ity karazana ity aho tsingerin'ny fanesorana an-tsokosoko ny amoniaka, hiteraka hatsiaka.
Ary nahita antontan-taratasy mahaliana iray izahay Rafael G. Beltran de University of the Andes any Kolombia
Amin'ny sary dia hitantsika hoe inona ny tsingerin'ny fitelina mahazatra.
Ny singa iza avy dia:
Fa izay hataontsika dia a tsingerin-tsindrona miserana.
Eto isika dia afaka mahita ny sarin'ilay prototype an'ny vata fampangatsiahana mitsentsitra vetivety, izay miasa tsy misy herinaratra.
Ireto misy singa manaraka:
Mpamory masoandro fisaka.
Ary farany sarin'ny prototype an'ny vata fampangatsiahana namboarina.
Ny fampahalalana momba ireo prototypes ireo dia azonay avy amin'ny pdf azonao atao download eto
Manavao ity lahatsoratra ity izahay miaraka amin'ny fampahalalana vitsivitsy momba ny fanafanana masoandro sy ny fampangatsiahana.
Fanafanana sy fihenan'ny masoandro
Mandritra ireo andalana ireo ihany no nahitantsika an'ity rakitra ity fanamainana rano, fanafanana masoandro ary fiakarana avy amin'ny injenieran'ny tontolo iainana.
Ahoana ny fomba fanaovana latabatra kafe amin'ny paleta
Ahoana no anaovana ny baolina fandokoana
Hevitra 61 momba ny "Ahoana ny fanamboarana vata fampangatsiahana tsy misy herinaratra"
23 Jona 2010 amin'ny 6:52 hariva
Raha tokony hampiasa angovo avy amin'ny masoandro isika dia afaka manamboatra rafitra fanamafisam-peo ho an'ny fiara, mametraka coil varahina fotsiny manodidina ny halavan'ny fantsom-panafody, manaingo azy amin'ny hafanana (azoko atao ny mieritreritra paraffin) ary noho izany dia mamonjy ilay soavaly roa mandany ny rafi-panafody ara-dalàna ary manome tombony ny herin'ny kaloria rehetra very isika (amin'ny farany ny vola dia avy amin'ny fandoavana solika) ary amin'izao fotoana izao, amin'ny alàlan'ny famoahana azy mivantana mankany amin'ny atmosfera, dia nanampy tamin'ny fihafanan'ny tany
20 aprily 2016 tamin'ny 12:39 maraina
Liana aho sakaiza
19 Aogositra 2017 amin'ny 3:51 hariva
Heveriko fa tsara ilay hevitra fa misy zavatra tsy ampy. valizy mifehy ny tsindry sy ny fivoahana mba hialana amin'ny tsy fahombiazan'ny tsindry mafy
19 Aogositra 2017 amin'ny 3:58 hariva
Mety tsara ny mamolavola endrika na manatsara ny rafitry ny beutikos miaraka amin'ny hevitrao hanatsarana azy io dia azo ampiharina amin'ny ogares fa efa nihatsara satria jerenao ny vidiny. ny olana dia tsy maintsy mifehy azy ireo ianao ary mitarika azy ireo amin'izay ilana izany
10 Aogositra 2010 amin'ny 8:03 hariva
Amin'ity rafitra ity ihany, mety hiteraka hafanana ve, toy ny paompy hafanana miteraka hatsiaka na hafanana?
16 Oktobra 2015 amin'ny 2:02 maraina
Salama amr manao ahoana ianao
16 Oktobra 2015 amin'ny 2:07 maraina
Salama arahaba ny fitiavana ny fiainako fa tiako be izy ary mandeha ny fitiavana ny fiainana tiako ianao tiako ianao tiako ianao tiako ianao tiako ho eo anilany
16 Oktobra 2010 amin'ny 3:27 maraina
Tsy ilaina ny manasarotra ny fiainana. Hiarovana ny sakafo na farafaharatsiny maro amin'izy ireo. Mila maka boaty plastika tsara kokoa ianao mba hampisarahana kely ny maripana, ao anatiny asio sira tsara, tsy maintsy apetrakao anaty harato ny sakafo ary ho hitanao ny sakafo miaraka amin'ireo harato ao anaty sira tsara, ambonin'ireo harato. azonao atao ny mametraka marika hahafantarana izay fantatrao. Azonao atao ihany koa ny manana rafitra hafa toy ny boaty izay voaroba ao anaty banga. Rafitra iray hafa izay tsy haiko dia misy zavatra sarotra kokoa izay tsy hampiasa herinaratra dia noho ny azota azota.
Novambra 25, 2014 amin'ny 3:18 maraina
"Sakafo"? "Aria"? "Mety hanana"? »Fantaro» sakafo? "Foana"? "Fantatra"? "Bebe kokoa"? Sns Sns Mamorona zavatra tsara kokoa mba hahitanay amin'ny fiteny soratanao ...
Novambra 9, 2010 amin'ny 4:50 maraina
Fa !!! ... elaela ve ianao sa tsy mahomby ny neurônanao?
Io sira adala io, nalainareo avy taiza ve sa tonga aminao fotsiny? ...
Ankoatr'izay: »-Ny rafitra iray hafa izay tsy haiko zavatra sarotra kokoa izay tsy handany herinaratra dia misaotra ny azota azota.» ¿¿??
Ary ny an'ny azota azota, tsy misy dikany hafa ... bah ...
19 Febroary 2014 amin'ny 4:48 maraina
Ny sira no ampiasaina ao amin'ny ref.Hanao fitsapana ohatra. Miaraka amin'ny sira ny tem. Azonao atao ny mampidina azy hatramin'ny 0 degre ary mandritra ny androm-piainanao koa, ny sira dia nampiasaina hitehirizana ny sakafo indrindra, saika ny hena rehetra, tsia, ny fanompana maivana dia ao anaty tsiro ratsy ary angamba raha mitady sira ianao dia mahita, dia tsy mahita. mieritreritra ianao fa mety ho safidy
Novambra 25, 2014 amin'ny 3:19 maraina
Ny sira dia nampiasaina hatrizay mba hanamaina ny hena ka hitehirizana azy ireo, fa tsy hanamboarana azy ireo izay zavatra tena hafa.
9 Novambra 2010 amin'ny 5:35 hariva
Jereo ny fiteninao rehefa miresaka olona ao amin'ity bilaogy ity ianao. Raha te hajaina ianao dia atombohy amin'ny fanajana ny hafa.
Hitako tamin'ny teny tena ratsy sy tsy fanajana tanteraka ireo teny nampiasanao tao amin'ny hafatrao.
Raha tsy manaiky ianao dia azonao atao ny mampahafantatra izany amin'ny teny hafa, miaraka amina tononkira hafa fa tsy manilika ny hevitry ny hafa.
Mieritreritra ve ianao fa hendry kokoa?
Porofoy izany, am-panajana.
Novambra 25, 2014 amin'ny 3:20 maraina
Marina tanteraka ianao, Eduviges.
30 Novambra 2016 amin'ny 2:55 hariva
Andriamatoa Alex .. Tena liana amin'ny fampiharana ny hevitrao amin'ny fiarako aho .. Izay toa mifanentana tokoa noho ny fomba nanazavanao azy .. Tena tiako io .. Raha sitrakao ny handefa ahy ny dingana ahafahana manohy manatanteraka hoy ny fanandramana .. mamela ny mailako aho .. Ary mialoha dia misaotra betsaka anao mr. Alex ..
22 Novambra 2010 amin'ny 4:35 hariva
Salama namana, ny vata fampangatsiahana izay nolazainao fa niasa tamin'ny menaka solitany dia ireo ihany no mandeha amin'ny gazy butana, izany hoe ireo fitaovana fananganana adsorption. Salama.
7 Janoary 2011 tamin'ny 8:11 maraina
Salama namana, tiako ny handefasanao vaovao misimisy kokoa momba an'io fomba io, te hanangana iray ao anaty fiarako aho, ahoana no anaovako azy ???? Misaotra anao
alefaso amin'ny mail ny valinteninao divasto@cantv.net
18 Febroary 2011 amin'ny 5:20 hariva
Hitako ireo rafi-pitohana ireo, avy amin'ny vata fampangatsiahana mpanelanelana kely ka hatramin'ny vata fampangatsiahana ara-barotra antonony, izay samy manana loharano hafanana isan-karazany: solitany, gazy butana ary / na LPG, 12 VDC, 120 ary 220 VAC, nijery iray aza aho izay nanambatra loharanom-baovao marobe hafanana izay nampiasaina arakaraka ny fahafahany. Izy rehetra dia amin'ny fanamboarana matanjaka sy mavesatra.
13 Febroary 2011 amin'ny 11:52 hariva
Ankasitrahana fa mbola tsy tany amin'ny toeram-piompiana na trano an-trano lavitra ny tanàna sy tsy misy herinaratra ianao
29 Mey 2011 amin'ny 1:44 hariva
JEREO IZAO RAHA HANATRIKA NY FANAFOTANA EO AMIN'NY FRIDY IZANY, MANINO NO TSY HANAMPINY AZY AMIN'NY FAMONJENA ENJINY MITSANGATRA ARY HANAO herinaratra? MMMMMMMMUIMUJ
7 Febroary 2016 amin'ny 5:01 hariva
Tiako ilay hevitra zaraiko ny hevitry ny tesla
4 Janoary 2014 tamin'ny 5:43 maraina
Salama ny rohy hampidinana ny pdf dia tsy mandeha, azafady raha misy afaka mampakatra azy indray dia tena tsara. Na alefaso aty amiko. Miarahaba sy misaotra
1 Febroary 2014 amin'ny 11:11 hariva
Raha mamokatra herinaratra amin'ny photovoltaics ianao dia manova ny fomba fampiasanao azy fotsiny, ary ny tontolo fahatelo dia tsy afaka mividy takelaka amin'ny masoandro ary mihazona azy ireo aza. Misy ny fanehoan-kevitra chemika mora vidy kokoa
14 Febroary 2014 amin'ny 9:00 hariva
Salama, eny eny, ny hatsiaka, na ny fihenan'ny hafanana na ny endothermy, dia fisehoan-javatra ara-batana na fanovana fanjakana, ny fotony indrindra dia ny an'ny ranomasina, izay vokatry ny taratra avy amin'ny masoandro dia manala ny rano, izany hoe avy amin'ny ranoka ny fiovan'ny fanjakana, izay endothermika, dia mifoka angovo hafanana, mampangatsiaka ny rafitra. Misy karazana fampangatsiahana hafa koa, dia ny tara-pahazavana amin'ny alina, fisehoan-javatra mahaliana mahery izay azo tehirizina ao anaty efitrano amin'ny alina amin'ny hatsiaka vokarina. arahaba, fernando
7 Mey 2014 amin'ny 7:39 hariva
Miarahaba anao, mpankafy olona manavao sy ati-doha tsy matotra aho. Amin'ireo fanehoan-kevitra voalohany dia nisy ny iray na dia misy lesoka amin'ny tsipelina aza heveriko fa tena azo atao, ara-toekarena ary tsotra, azota mitana rano, tena tsara, manohy manome hevitra!
4 Jolay 2014 amin'ny 6:02 hariva
Aiza no hividianana vata fampangatsiahana miasa tsy misy herinaratra? Miasa amin'ny hafanana izany, na kerocene, labozia, paraffin, labozia, gazy na izay antsoin'izy ireo hoe loharanom-pahavaratra.
4 Jolay 2014 amin'ny 6:19 hariva
Fony aho mbola zaza, tamin'ny taonjato faha-XNUMX, dia nahita vata fampangatsiahana tao amin'ny tanàna kely iray tao Oaxaca, Mexico, izay nampiasa jiro ambany kokoa. Io hafanana io dia nanaparitaka ny entona hangatsiatsiaka.
Nangatsiaka be izy ireo ka nanao popsicle ary ho simba ny zava-pisotro misy alikaola izay tao anaty kaontenera fitaratra raha tsy nalaina ara-potoana izy ireo.
Taona vitsivitsy lasa izay dia hitako tamin'ny internet fa amidin'izy ireo ity karazana vata fampangatsiahana ity izay nampiasa hafanana tamin'ny fiasan'izy ireo tany amin'ny toerana tsy misy herinaratra. Namidy tany Etazonia izy ireo.
Ny zavatra ratsy dia tsy hitako izao rehefa ilako izany.
Misy mampahafantatra ahy ve?
20 Jolay 2014 amin'ny 5:32 hariva
Ao anaty fanehoan-kevitra tsy fantatra anarana dia milaza fa ny fampiasana bibilava varahina ao anaty fivoahana, toa hevitra tsara izany, ary te hahalala bebe kokoa momba an'io fomba io aho, azoko antoka fa io no ekonomika indrindra, mankasitraka ny fampahalalana momba izany aho.
23 septambra 2014 tamin'ny 3:54 maraina
NY LOHAHEVITRA MOMBA NY SISTEMA FANORENANA NY FANAVOTANA NY HEAT NO LOHAHEVITRA TSY MAINTSY ATAO HATRANY NY ENERGY MANANA NY FANAVAOZANA dia azo raisina ho tombony amin'ny SOLARATSY ROA SY NY LOHA HEVITRA MISY FANAVOTANA SA NY TANINDRAZANA TANINDRAZANA. TIAKO IZAY IZAY MAHAY fahalalana bebe kokoa momba ny lohahevitra hampiharihariana izany, Hisaotra anao aho satria misafidy ny zava-drehetra momba ny angovo madio sy havaozina ………… ..
23 septambra 2014 amin'ny 7:38 alina
Salama, efa 200 taona no nampiasaina ity rafitra ity ...
7 Oktobra 2014 amin'ny 12:13 maraina
Malala. Manana sy mampiasa vata fampangatsiahana solitany aho. Tsy misy herinaratra elektrika ao amin'io toerana io. Tena fahita any an-toerana izy ireo. Ny rafitra dia mitroka, ary tsy mila afa-tsy ny hafanan'ny lelafo kely fotsiny. Raha soloina loharano hafa io hafanana io, dia vokatra mitovy no azo. Ny rafitra dia miroborobo amin'ny fifandraisana misy eo amin'ny mpivady izay mitambatra amin'ny maripana iray. Miala ny hafanana ny iray amin'izy ireo, ary ao anaty condenser an'ny vata fampangatsiahana dia miharo izy ireo, mamoaka rano indray. Araka ny fantatry ny rehetra, ny fiovan'ny fanjakana dia miteraka fitrohana angovo, (avy eo dia ny anarana hoe rafitra fanentanana) ary esorina amin'ny sakafo ao anaty vata fampangatsiahana. Raha mbola misy loharano mafana, dia hiverina ny tsingerina. Na izany aza, mila haavo lavorary izy io. Angamba satria ny flue dia feno soot na tsy hisintona ampy. Noho izany antony izany dia tsy azoko antoka fa afaka miasa amin'ny fiara mandeha izy io.
28 martsa 2016 amin'ny 1:04 hariva
Azonao atao ve ny mandefa ny sarin'io vata fampangatsiahana fanentanana io amiko, sy mail?
14 Febroary 2015 amin'ny 3:02 hariva
Salama daholo. Mipetraka amin'ny karajia aho. Amin'ireny, ny vata fampangatsiahana mazàna dia tsy dia mahazaka entona sy herinaratra. Ny gazy no azo ampiharina indrindra nefa lafo be ho an'ny toekarena tery. Ny hevitra fampiasana herin'ny masoandro amin'ny faritra tropikaly dia tsara. Fandraisana anjara lehibe. Raha ny marina, hitako fa mahasoa kokoa noho ny tsy fitovian-kevitra ny fandraisana anjara fa tsy ihomehezana. Misaotra ary araho
9 aprily 2015 amin'ny 5:29 hariva
Misy ny fanehoan-kevitra adala, raha misy loharano hafanana ivelany, na herinaratra, solika isan-karazany, na herin'ny herinaratra avy any an-dakozia ohatra amin'ny alàlan'ny ranoka famindrana dia misy loharano izay mahatratra 170 degre dia manatanteraka ny tanjon'ny maodelin'ny fitrohana. fampandrosoana lava nandritra ny zato taona mahery ny fanangonana traikefa ary misy patanty avy amin'ny electrolux ho an'ny maodely mahomby indrindra ……
2 Mey 2015 amin'ny 6:10 hariva
Tsara ny tolakandro, tena liana amin'ny fanaovana vata fampangatsiahana solitany aho, izany dia ho an'ny faritra lavitra tsy misy herinaratra, ahoana no fomba anaovako azy avy amin'ny vata fampangatsiahana herinaratra ananako ary nodoran'ny compressor. Tena ho aho feno fankasitrahana raha afaka mandefa ahy ny torolàlana sy ny drafitra hanatanterahana an'ity tetik'asa ity, teto amin'ny fireneko no namarotany azy ireo saingy efa an-taonany maro, izao dia tsy tratra izy ireo.
6 Mey 2015 amin'ny 7:42 hariva
Liana amin'ny lohahevitry ny vata fampangatsiahana ny fitrohana aho, amin'ny tranga manokana nandinihako zavatra momba izany, ity dia lohahevitra iray ankehitriny izay miparitaka be amin'ny tontolon'ny indostria, indrindra amin'ny rafi-pitomboana, ohatra amin'ny zavamaniry siramamy izay araraotin'izy ireo. an'ny ampahany amin'ny hafanana avy amin'ny turbines mba hiteraka hatsiaka amin'ny zavamaniry fampangatsiahana amin'ny alàlan'ny fandraisana ary misy ohatra hafa any Venezoela amin'ny indostrian'ny vokatra hena.
26 Novambra 2015 amin'ny 11:10 hariva
Ny fanehoan-kevitra dia zava-dehibe avokoa; Noho izy ireo dia manazava ny fisalasalana isika, manadihady bebe kokoa momba izay voalaza isika, mamoha hevitra hafa ary ankoatry ny fifandraisana dia mahazo fahalalana hafa isika. Misaotra anao
28 Febroary 2016 amin'ny 1:51 hariva
Salama, avy any Cali aho ... Kolombiana ... tsy mahalala na inona na inona momba an'ity lohahevitra ity aho ... fa tiako ... hianatra ... fantatrao hoe inona ilay fitaovana na inona ilay anarana. .. izay anaovana ireo. vata fampangatsiahana ... na valizy ... amin'ny plastika ... na lamba ... mitazona ny hatsiaka ... toy ny lamba plastika izany ... hitako nametraka amina labiera izy ... tsara tsy izany ... ilainy izy ireo hanao iray izay hitahirizana ireo trondro ... satria rehefa manjono aho ... taolana toy ny valizy ... lava ... misaotra
6 martsa 2016 amin'ny 6:13 hariva
Miarahaba ny rehetra tamin'ny fandraisany anjara hevitra, nanentana azy ireo aho hanohy ny hevitr'izy ireo satria tombontsoa lehibe ho an'ny olona manana fandraisana andraikitra sy dinamika amin'ny tolona ho an'ny angovo azo havaozina izany, liana amin'ny fomba fanaovana lasantsy na vata fampangatsiahana masoandro aho, Raha misy afaka manome ahy ny drafitry ny fomba hanaovana izany azafady misaotra an'i José Luis avy any Goatemalà
22 Mey 2017 amin'ny 6:53 hariva
Ny namako dia antsoina hoe polyurethane, mifangaro amin'ny habe roa izy ireo izay tsy maintsy fantatra izay ho an'ny karazana asa tokony hatao, ity vokatra ity dia misy fampiharana maro, avy amin'ny faladian-kiraro (azafady, ny litera ceta dia tsy manisy marika ahy amin'ny fitendry na ny litera ube) sy izay misisika rehetra
28 martsa 2016 amin'ny 1:00 hariva
satria mbola tena tanora ato an-tranoko dia nisy vata fampangatsiahana, tsara! Karazan-tsolika ihany no laniny ary nampangatsiaka tanteraka ny sakafo rehetra. Ny lasantsy dia 2 litatra isan-kerinandro ary nisy lelafo mivantana tamin'ny fantsom-bary izy io ary nitovy be tamin'ny labozia ny lelafo. Inona ny malaza ! Androany ny fitaovana famatsiana vata fampangatsiahana iray dia mitentina avo arivo heny na 10.000 heny noho ny vata fampangatsiahana solitany taloha.
2 Jona 2016 amin'ny 5:15 maraina
Alina tsara, tamin'ny fahazazako dia nanana vata fampangatsiahana solitany tany an-tsaha ny raibe sy renibeko, androany aho dia mitady vaovao momba ny fomba fiasa satria liana amin'ny zavatra rehetra mifandraika amin'ny fikolokoloana ny tontolo iainana aho, ary satria mitady izay azo atao izany. mangatsiatsiaka efitrano. Tonga ao an-tsaina fa ity vata fampangatsiahana ity dia afaka miasa amin'ny entona metana vokarina miaraka amin'ny biodigester, na amin'ny concentrator amin'ny masoandro. Tena mahaliana ilay lohahevitra. Miarahaba.
2 Jolay 2016 amin'ny 10:56 hariva
Estefania. *. Salama, azafady, raha afaka mandefa drafitra momba ny vata fampangatsiahana solitany na rafitra hafa ianao, satria hipetraka any amin'ny firenena tsy misy lasantsy na herinaratra aho. Misaotra anao, misaotra. estefania603@hotmail.com.ar
22 Mey 2017 amin'ny 7:05 hariva
Manavao ny lahatsoratra amin'ny alàlan'ny lahatsarin'ilay lahateny very aho :)
28 Aogositra 2017 amin'ny 10:20 hariva
Salama raha tsara fanahy be ianao amin'ny fanampiana ahy hanova ny vata fampangatsiahana herinaratra ho lasa lasantsy lp, manome ahy drafitra sy ny fampahalalana rehetra hanampy ahy hanao izany amin'ny tenako. Hatramin'ny fotoana fohy dia hipetraka amin'ny toerana tsy misy herinaratra aho ary mafana be ary nahita vata fampangatsiahana gazy nefa lafo be izy ireo ary tsy zakako izany. Misaotra betsaka Manantena aho fa afaka manampy ahy ianao.
2 Mey 2018 amin'ny 2:06 maraina
Tiako ny pejy ianarana zavatra mahaliana maro.
9 martsa 2019 amin'ny 2:29 maraina
Tany Kiobà, namidiko ireo vata fampangatsiahana natolotra, napetraka tao amin'ny tsena kely any an-tsaha ny electrolux, mavesatra be izy ireo ary intelo lafo ny vidin'ny herinaratra mitovy habe aminy.
Miguel Espinosa orlando florida usa.